Fanovana ny governemanta : eny amin’ny Antenimiera ny baolina | NewsMada
Fanovana ny governemanta : eny amin’ny Antenimiera ny baolina
Tompon’ny teny farany ny eny Tsimbazaza…. Amin’ny mety hanovana ny governemanta na tsia. Andrasana ny ho fahendren’izy ireo manoloana ny mety ho tsindry na koa faneriterena samihafa. Eo koa ny fahatsapan-tenany noho ireo depiote, nametrahan’ny vahoaka ny fitokisany sy misolo vava azy. Iaraha-mahalala rahateo izao fahantrana lalina iainan’ny vahoaka izao. Ny olana eo amin’ny sehatra rehetra : sosialy, toekarena, politika…
Anjaran’izy ireo ny mijery ny ho mpitantana afaka miasa ho fanarenana izany rehetra izany sy hijery ny tombontsoan’ny vahoaka. Tsy ho diso safidy ireo depiote fa hahay handinika sy handanjalanja ny hoavin’ny firenena. Mba tsy hiverina intsony ireo goaika antitra sy mpivadika palitao. Ny tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany sy ny antokony na ny namany.
Anisan’ny mason-tsivana tokony ho hita amin’izany ny olona azo itokisana sy manana ny fahaiza-manaony, hanatanteraka ny fandaharanasan’ny fanjakana. Fantatry ny mpiara-miombona antoka amintsika sy eken’izy ireo ary afaka hanainga indray ny fanarenana ny toekarena. Misokatra amin’ny rehetra, toy ny sehatra tsy miankina sy ny mpanao politika na koa ny firaisamonim-pirenena ary afaka mampiray ny hery rehetra…
Midika izany fa hitodika eny Tsimbazaza ny mason’ny rehetra, manomboka izao. Miandrandra sy manantena azy ireo ny vahoaka.